Rohingya Students Forum: SHOBU: A Legendary Singer of Rohingya [1950-2009]
Rohingya Patriotic Singer Shobu
🎤 ရိုမျိုးချစ် အဆိုတော် ရှော့ဘူ [၁၉၅၀-၂၀၀၉]🎤
🎼 တင်ပြ-------- လူထုဝဏ္ဏ |
ရိုတေးဂီတသည် မည်သည့်အချိန်အခါသာမညက စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ကို တိကျသိချာစွာ ဖော်ပြရန် ခဲယဉ်းပေသည်။ အေဒီ ၁၇ ရာစုမှာပင် ရိုတေးဂီတသည် ဘုရင့်နန်းတော်တွင်း အတီးအမှုတ်အဖြစ် တီးခတ်ခဲ့ရသည့် အဆင့်ထိ ပြောင်မြောက်ခဲ့သည်ကို သမိုင်းစာမျက်နှာတွင် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရသည်။
ကိုလိုနီခေတ် နောက်ပိုင်းကာလတွင် အမျိုးသားအဆိုတော်ကြီး ဇာဖော်ရ်ကာဝါလ် ကဲ့သို့သော် မျိုးချစ် အနုပညာရှင်များပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးပြီးခေတ် ရိုအမျိုးသားတေးဂီတလောက၌ ထင်ရှားပြောင်မြောက်သော အဆိုတော်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုထဲတွင် ရှောဘ္ဗီရ်အဟ်မတ် [Shobbir Ahmad] ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ထက်သန်သည့် လူငယ်တစ်ဦးက တစ်မူထူးခြားပေစွ။ သူ၏ တေးလင်္ကာအစွမ်းသည် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ စိတ်နှလုံးသားကို အပိုင်စီးခဲ့လေသည်။ အမျိုးသားစိတ်ဓာတ် ပြန်လည်နိုးထလာ စေခဲ့သည်။ သူ့ တေးသွားသည် ဗဟုသုတပေါကြွယ်သည်။ ခေတ်ကာလ အခြေအနေနှင့် ပြေပြစ်အစပ်တည့်သည်။ ဇာတိစိတ်ဇာတိမာန် ထင်ဟပ်နေသည်။ ဤအကြောင်းအရာများသည် သူ့တေးသီချင်းကို ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အသည်းစွဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူ၏ အံ့မဆုံး နားဝင်မဝ တေးသီချင်းများက အာရ်ကာန်ပြည် ဝေဟင်ကောင်းကင် တစ်ခုလုံး ပဲ့တင်ရိုက်ခဲ့သည်။ စိတ်ခိုင်တဲ့ သူတွေကိုတောင် ဖယောင်းတိုင်လို ပျော့ပျောင်းစေကာ မျက်ရည်လည်ရွဲစေခဲ့သည်။ နောင်တွင် အဆိုတော် ‘ရှော့ဘူ’ ဟု ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသား ဂန္တဝင် အဆိုတော် ရှော့ဘူသည် ၁၉၅၀ ခုခန့်လောက်တွင် မောင်းတော မြို့နယ် ရှီခ်ဒါရ်ဖာရာ (မြို့မကညင်တန်း) ကျေးရွာ၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဖခင်မှာ အေဇဟာရ်မျာ ဖြစ်သည်။ အလယ်တန်း အဆင့်အထိ ပညာသင်နိုင်ခဲ့သည်။ မျိုးခြားခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ ရေရှည် ဖိနှိပ်မှုအောက် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်။ တဖက်အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဖိနှိပ်မှုကို ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရသည်။ မိမိငယ်ရွယ်ကပင် ရင့်ကျက်လာခဲ့သော အဆိုအတီးအမှုတ် ဝါသနာသည် သူ့ခါးသီးသော ခံစားချက်ကို ဖော်ထုတ် မျှဝေရန် သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူသည် မိမိ၏ အနုပညာအစွမ်းဖြင့် အမျိုးသားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဝေဖန်ရေး နှင့် သာသနာရေး တေးသီချင်း အမျိုးမျိုးကို ကိုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့၊ ကိုယ်တိုင်သီဆိုကာ မိမိတို့ရဲ့ မွေးရာပါအခွင့်အရေးတို့ လှိုင်းကြီးကြမ်းခတ် မြေနုကမ်းပြိုသလို တဖြေးဖြေး သိမ်းဆည်းပျက်ဆီးနေသည်ကို လက်တွဲ မထိန်းသိမ်းဘဲ မြူးထူးပျော်ပါးမှု၌ မွေ့လျော်နေသည့် သူတို့ကို မျိုးချစ်စိတ်၊ ပြည်ချစ်စိတ်၊ ဇာတိစိတ် ဇာတိမာန်ကို နိုးဆော်ပေးခဲ့သည်။
သူ၏ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော တေးသီချင်းများတွင် တမင်မျိုးခွဲ နှိပ်စက်နေသော ထိုခေတ်အစိုးရအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့မှုကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ခြိမ့်ခြောက်မှု ခံခဲ့ရသည်။ ငွေဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ်လည်း ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် သူသည် ဖိနှိပ်သူတို့၏ ရှေ့တွင်ဒူးမတောက်ခဲ့ပေ။ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် သူ၏ အလွန်တရာချစ်မြတ်သော အမိမြေ အာရ်ကာန်ပြည်မှ ထာဝရ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံသို့ ခိုလှုံခဲ့သော်လည်း သူ၏ စိတ်နှလုံးသည် အာရ်ကာန်ပြည်၌သာ ကျန်ရစ်နေသည်။ သူ့အမျိုးသားတို့သည် အမိပြည်၌ ရက်စက်ဖိနှိပ်မှုကျော့ကွင်း မိနေသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် ခံစားလျက် ရင်နာနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုင်မနေသာ သူ၏ အနုပညာစွမ်းရည်ကို ဗမာစစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှု စက်ကွင်းတွင် ကျရောက်နေသော ရိုဟင်ဂျာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် ဆက်လက် အသုံးချခဲ့သည်။ ရပ်ဝေးနယ်ခြားမှနေပြီ ဇာတိမြေ၏ လွမ်းဆွတ်မှုဖြင့် လွမ်းချင်းများစွာကို ရေးဖွဲ့သီဆိုခဲ့သည်။
ရှော့ဘူသည် ရိုဇာတ်ပွဲ ပြသရာတွင် အဓိက ပါဝင်သရုပ်ခဲ့သော အမျိုးသားအဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မောင်းတောဘူးသီးတောင်၌ တလည်လည်ပြသခဲ့သော ပြပွဲများတွင် သူနှင့် သူ့အပေါင်းအဖော် လူငယ်တစ်ချို့က ရိုတို့၏ လူမဆန်သော အခြေအနေကိုလည်းကောင်း၊ ရှေ့ရိုတို့၏ ဘုန်းမီးနေလ ထွန်းပခဲ့သည့် အခြေအနေကိုလည်းကောင်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ အမျိုးသာဘာ၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှုကို လည်း အပတ်တကုတ် ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
သူသည် မျိုးချစ်စိတ် ထက်သန်သည်နှင့်အမျှ သူ၏ အလွမ်း သီချင်းများနှင့် သိန်းသောင်းများစွာသော ရိုတွေရဲ့ စိတ်ထဲ နေရာယူနိုင်ခဲ့သည်။ ရိုဟင်ဂျာ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွင်လည်း သူ့ တေးသီချင်းများ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့သည်။
“Allahr bondah Rosullor Ummot…”
“Arakanor Meri Hírajohar…..”
“Decór lagí diba Jan-Foran…”
“Rohingya bái age Uozo…, Rohingya bái age uozo, zodi Arakan faitosou…”
“Nirole fori gúm roilá Rohingya Bài, Nofá Nuksàn nobafila…”
စသော သီချင်းများသည် ယနေ့ထက်ထိ ထိပ်ဆုံးကပင် လိုက်နေသည်။ ရှော့ဘူ တေးသီချင်းများကို Shóbu Collections မှ နားဆင်တော်မူပါ။
ရှော့ဘူသည် အလွန်ခင်ခင်မင်နေတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သူ့ဘဝ၏ အချိန်အများစုကို မိမိလူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက် တေးသီချင်းများ၊ ကဗျာလင်္ကာများ ဖွဲ့ဆိုပြီး အမျိုးတာဝန်ကျေခဲ့သည်။
သူ၏ တေးသီချင်းများသည် အသံတိတ် အဖိနှိပ်ဆုံးခံ ခိုရာမဲ့ ရိုတွေအတွက် နိုးထခိုလှုံရာဖြစ်သည်။ သူသည် ရှေး ခေတ်စားခဲ့သော ဘာတာလီတေးမျိုးမှ ခေတ်မီ ရိုဂါနာ လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင် သီဆိုခဲ့သည်။ ရှော့ဘူသည် တေးလင်္ကာဉာဏ်ထက်မြက်သည် သာမက ဂီတတေးလုံးတွင်လည်း အလွန်အစွမ်းတက် သည်။ မယ်ဒလင်တီးရာတွင် လူလွန်ဟုပင် ယနေ့ဂီတပညာရှင်များက ဆိုစမှတ်ပြုကြသည်။ “ရှော့ဘူလောက် မယ်ဒလင်ကျွမ်းကျင်သူ အာရ်ကာန်တွင် မပေါ်သေး”ဟု တအံ့တဩ ပြောကြသည့်အထိ ထူးချွန်သူဖြစ်သည်။
ရှော့ဘူသည် ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်တွင် ဆီးချိုရောဂါခံစားခဲ့ပြီး မကွယ်လွန်မီတစ်နှစ်တိုင် ကျောက်ကပ်တွင်းမှ ရေပိုအညစ်အကြေးထုတ်ဖယ်သန့်စင်သော ကုသမှု ( Dialysis ) ကိုခံယူခဲ့ရသည်။ ရောဂါပြင်းထန်မှုကြောင့် ကျောက်ကပ်နှစ်ခုစလုံး ပျက်စီးသွားခဲ့သည်ဟု ဆရာဝန်က ဆိုသည်။ ဆေးရုံတင်၍ နှစ်ပတ်ခန့်ရှိရာ နောက်ဆုံးထွက်ခွာမယ့်အချိန်ရောက်လာခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာ ဂန္တဝင် မျိုးချစ်အဆိုတော် ရှော့ဘူသည် မိမိအနုပညာတေးဂီတအစွမ်းဖြင့် အမျိုးသားတာဝန်ကို ကျေပွန်ရင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက် နံနက် (၉း၂၀) ခန့်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံ၊ ဂျီဒ်ဒါ့မြို့ရှိ ဘုရင် အဗ္ဗုဒူလ်အာဇီးဇ် ဆေးရုံကြီး [ King Abdul Aziz University Hospital in Jeddah ] ၌ အလ္လာဟ်အမိန့်ခံယူသွားရှာလေသည်။ ကွယ်လွန်သည့်အချိန်တွင် သူ့အသက် (၅၉)နှစ် ရှိခဲ့သည်။သူ၏ အနှိုင်းမဲ့ ကြိုးပမ်းမှုနှင့် အတိုင်းမဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်သည် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းတွင် စာမျက်နှာ တစ်ခု တွင်ခဲ့လေသတည်း။
Kaladan Press Article:
Arakanese Rohingya patriotic singer dies by Tin Soe.
Note: If you have any information. about Shóbu, please write to us in the comments box.
Posted by Rohang king at 11:52 AM
Labels: ရိုကျော်, books, Gana, genocide docs, poem, သုတ
Arakan Decór Bulbuli
RO THU LAY [Rohanglay's Poem]
Raatkaraní Fúl [Night Blooming Jasmine]
Luri Fiçá Arr Loot Noó Fái
EK-DUI FORÍ FOT THANI
NOORANI QUAIDA BYaRohingya Writer
EK COMKERDE YADDAC
ဗမာပြည်၏ တစ်ဦးတည်းသော ဘုရင်မ ရှင်စောပု
Parts of the Body in Rohingya Zuban
The parts ofaFlower in Rohingya Zuban
‘Gya E’ Poem with English Translation
Hajar al-Aswad အကြောင်း တစ်စိတ်တစ်ကြောင်း
‘ဘာသာခြားတွေဟာ မုန်းစရာလား’ ဂျပန်ပညာတော်သင်သွား ဆရ...
Nahol (ထွန် ဆိုင်ရာ ရိုစကားလုံးများ)
Dhéñr Híssá Okkól (ခြေနင်းမောင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ...